लज्जित छु, तिम्रो प्रेमको रक्षा गर्न सकिनँ !- विचार - कान्तिपुर समाचार
भाइ नवराज, तिम्री आमाजस्ता सयौं आमाको काख रित्तो बनाएर, तिमीजस्तै सयौं युवाले रगत बगाएर ल्याएको गणतन्त्रले तिम्रो प्रेमको रक्षा गर्न नसक्दा मलाई आत्मग्लानि भएको छ ।
जेष्ठ १५, २०७७ गीता रसाइली
भाइ, तिमी र तिमीजस्तै प्रेममा बलिदान गर्ने जोडीको कसम खाएर भन्छु— बाँचेका हामी दलित समुदायका युवाहरूले तिम्रो अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनेछैनौं । वास्तवमा तिमीले प्रेममा हारेका होइनौ, जीवन आहुति दिएर जितेका छौ । यो सामन्ती निरंकुश ब्राह्मणवादी समाजसँग लड्दालड्दै तिमी जितेर गएका हौ । बाँकी लडाइँको जिम्मा हामीलाई लगाएर गएका छौ । हाम्रो शरीरमा एक मुठी रगत छउन्जेल, अन्तिम सास रहुन्जेल हामी लडिरहनेछौं । तिम्रा निम्ति, तिमीजस्तै प्रेमीका निम्ति । हाम्रा निम्ति, श्रम र सीपका खानी दलित समुदायका निम्ति ! हार्दिक श्रद्धाञ्जली, प्रिय भाइ नवराज विक र प्रेममा लड्दालड्दै जीवन गुमाउने संसारका सबै प्रेमीजोडीप्रति !
प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ ०९:३९